Ma Dhab ahaanbaan Imtixaanay kulamada qeexitaanka sare on your telefoonada smart? Haddii aad tahay gamer ah oo doonaya in ay la kulmaan reyreyn kama dambaysta ah ee ciyaaraha ku saabsan telefoonka smart oo kiniin ah, markaas kuwaas oo kulan qeexitaanka sare waa doorasho kaamil ah oo aad u! Kulan HD waxaa laga heli karaa in qaybaha kala duwan oo waxay yeelan doonaan awoodda inay si dhakhso ah u jeedi kiniin ama telefoonka smart saldhigga ciyaaraha ah oo wuxuu galay.
Halkan waxaa ku qoran liiska yar oo ka mid ah kulan HD ugu wanaagsan ee la heli karo android 2015 in ay ka qiimo kubad!
1.Asphalt 8: hawada
Asphalt 8 waa ciyaarta kama dambaysta tartanka baabuurta laga heli karaa qeexitaanka sare oo aad telefoonada android smart iyo kiniiniyada. Ugu wanaagsan ee naqshadeynta tayada iyo saamaynta dhawaaqa tartanka ayaa in ka badan macquul badan abid sameeyo! Baabuurta ka qaar ka mid ah hogaanka manufactures sida Ferrari daro xiddiga shanaad in this Ciyaar fantastik.
Ma waxaad u jecel kubadda cagta? FIFA 14 oo ay EA Sports waa u roon yahay run, waayo, kuwii ku jeclaa oo dhan kubada cagta halkaas! Waxaad xor u tahay inaad dooratid kooxda u gaar ah, iyaga waafajiyo ilaa iyo guuleysan taxane kala duwan. Kulankaan ayaa la soo saaray iyadoo Sports EA horumarinta rasmiga ah, taas oo macnaheedu yahay ma jiraan wax kulan kale oo kubada cagta ka sii dhab ka badan hal!
Legend: Dhiig nasaha waa ciyaar u gaar ah uu dagaal ka taagay xilligii Roman. Iyada oo tiro ka mid ah gaadiidka iyo hababka ciyaaro, taasi ciyaarta HD dagaalka waa mid ka ugu fiican ee aad telefoonka smart. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa, booqo link halkan siiyo iyo soo bixi kulankaan lacag la'aan ah.
4.Dead kiciyaan 2
Kiciyaan dhintay waa version labaad ee ciyaarta asalka ah. Waa toogashada kulan heer sare halkaas oo ay aheyd in aad dilo zombies soo socdo si ay u ilaaliso naftaada. Noocyada kala duwan ee hubka iyo naqshadeynta qeexitaanka sare loogu qaado waayo-aragnimo user iyo ciyaaryahankaasi u geyso aduunyo cusub.
Ma rabtaa in aad quusin duni galay? Kulan ficillo Tani waxay keenaysaa in aan xad lahayn oo xiiso leh iyo biimayn meesha aad heli karaan si degdeg ah u hub aan xad lahayn. Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara Solo ama u yeedhin saaxiibbadaada u ciyaaro kula! Ciyaarta ayaa gebi ahaanba bilaash ah si loo soo dajiyo aad telefoonada smart ama kiniiniga.
Racing 6.Real 3
Ma aad hore sida taxanaha ciyaaraha Real Racing? Racing Real uu leeyahay tiro ka mid ah taageerayaasha mar walba sugaynaa ay version dambeeyay. The qoraalkii saddexaad ee taxanaha ciyaaraha taas horay loo bilaabay on dukaanka play lacag la'aan.
A weli kulan kale oo Zombie liiskan, Dead Saamaynta bixisaa ciyaartoyda ay reyreyn iyo adrenaline rush kama dambaysta ah ee zombies ka toogtay. Ciyaaryahanka ayaa waxa uu leeyahay in ay toogtaan zombies iyo sidoo kale ka heli sababta keentay in cudurka.
Kulan An toogashada ficillo, Front Line Commando 2 ballan ciyaartoyda ay la ah wanaajiyey ciyaaraha aragnimo waqtigan. Iyadoo qaar ka mid ah heerarka cusub iyo heerarka bonus, ciyaarta ku faantaa labada ay goob iyo naqshadeynta.
9.SHADOWGUN: dhintay Zone
Kulankaan qeexitaanka sare u android ka buuxa tallaabo. Iyadoo feature ciyaaryahankii multi iyo naqshadeynta xal sare, qori Shadow waa doorashada ugu dambeeysa ee qof kasta lover tallaabo. Kulankaan ayaa waxaa heli kara download ka dukaanka play android.
Qaado gaari oo ka dhacay wadada si aad u ogaato cadaawayaashiinna iyo kuwa dagaalamo! Iyadoo baabuurta ugu wanaagsan, hub, muuqaallo iyo codad, dhammaadka lahayn waa hubaal ciyaarta aad had iyo jeer lagu sugayo.
> Resource > Emulator > Top 10 HD Games u Android 2015